ဆိုင်များစွာတွင်တူညီသောပုံရိပ်ကိုမည်သို့ပြသမည်နည်း။ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
Created On ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက်
ဟုတ်ပါတယ်! Easy Multi Display ဖြင့်စတိုးဆိုင်မျိုးစုံတွင်တူညီသောပုံရိပ်ကိုအလွယ်တကူပြသနိုင်သည်။ သင်၏ folder များကို configure လုပ်ရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ Cloud သည်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်သတိထားပြီးလေးနက်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်အကျော်ကြားဆုံး hosting ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။
ဒီဥပမာမှာငါတို့သုံးပါလိမ့်မယ် OneDrive သို့သော်သင်ကဲ့သို့သောအခြား cloud service ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် Google Drive ကို or Dropbox.
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် OneDrive (သို့မဟုတ်အခြား cloud hosting ကုမ္ပဏီများ) တွင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်းကိုတည်ဆောက်ပါ။
ထို့နောက်သင်၏ဆိုင်များတွင်သင်အသုံးပြုလိုသောဖိုင်များကိုတူညီသောအမည်ပေးပါ။ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကို "Welcome_pharmacie" လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ ဤပုံကိုသင်၏ဖိုင်တွဲနှစ်ခုထဲသို့ကူးယူပါ။
သင်၏မိုဘိုင်း (သို့) ကွန်ပြူတာမှတဆင့်ရုပ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲလိုပါကဖိုင်အမည်ကိုသိမ်းဆည်းထားစဉ်ပုံဟောင်းကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါ။ Easy Multi Dislay တွင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပုံအသစ်ကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဆေးဆိုင် Biarritz မှကြိုဆိုပါသည်
ဆေးဆိုင် Guethary မှကြိုဆိုပါသည်
Raspberry Pi Compute Module4အင်အားကြီး 4K ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်
'Vegas Means Business' သည် Resorts World ၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တွင်ပထမဆုံးကြော်ငြာကိုအမှတ်အသားပြုသည်